Falanqaynta suuqyada FXCC Blog
Tusaha "advanced-iframe-custom" lama samayn karo si isku mid ah faylka casriga iframe. Faylal gaar ah ayaa lagu keydinayaa buuggan sababta oo ah Wordpress tirtiro faylka caadiga ah ee faylka inta lagu jiro cusbooneysiinta. Fadlan fure u samee faylka gacanta.
Faylka "advanced-iframe / js / ai_external.js" lama kaydin karo. Fadlan hubi oggolaanshaha js js iyo keydinta mar labaad. Faylkan waxaa loo baahan yahay dib u eegista dibadda! Haddii aadan isticmaalin dibad-bixinta dibadda, fadlan abuur feyl faaruq ah oo leh magaca ai_external.js ee faylka js ee fiilada.